Orinasa Natema any Toamasina II: fiaraha-miasan’ny Henri Fraise sy Givaudan | NewsMada
Orinasa Natema any Toamasina II: fiaraha-miasan’ny Henri Fraise sy Givaudan
Natema, orinasa iray mitsangana any Antoby, Toamasina II, fiaraha-miasa eo amin’ny orinasa Henri Fraise sy Givaudan, indostria malaza eran-tany amin’ny famokarana sy fanodinana zava-manitra. Fiaraha-miasa nampiasam-bola 45 miliara Ar, samy ahazoan’ny andaniny sy ankilany tombontsoa mitovy. Tonga eto Madagasikara izany ity orinasa ity, izay efa manana traikefa maro maneran-tany amin’ny sehatra trandrahiny, sy efa mpandray azo antoka ny vokatra vokariny manerana izao tontolo izao. Notokanan’ny filoha Rajaonarimampianina, ny volana septambra 2015 io orinasa io.
680 t ny vokatra Eugénol sy izay akora hafa azo avy aminy, ataon’io orinasa io, mandritra ny taona 2017/2018, mitentina 47 miliara Ar. Ho fanatrarana ny tanjona, 800 t ny akora fototra avy amin’ny jirofo, vidina eto Madagasikara ny maro indrindra, fa mety misy avy any amin’ny firenen-kafa ho fanampiny hamenoana ny tinady tonga ao amin’ny Natema. 35 miliara Ar isan-taona ny vola atokana hividianana izany ; 3 miliara Ar ho fandraisana mpiasa vaovao.
Nanambara fanomezan-toky amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa amin’ny alalan’ny fahazoan-dalana eo aminy hitandroana izany, sy ho fanabeazana ireo mponina any amin’ny manodidina, indrindra ireo izay miasa amin’ity sehatra ity. Eo am-panaovana fanadihadiana ny fanitarana ny asa amin’ny fitrandrahana lohamenaka avy amin’ny lavanila ny Natema, amin’izao fotoana izao. 15 tapitrisa dolara ny vola hoenti-miasa ho an’ny fanitarana. Toerana 88 izao maneran-tany ahitana ny Givaudan, mampiasa olona 10.000.